Mpanamboatra sy mpamatsy tontonana amina alim-bary vita amin'ny alim-baravarankely - Orinasa mpiorina vita amin'ny aliminioma ao Shina
Panel tsy manam-paharoa Core panorenana Aluminium Composite tontonana
Fampahalalana fototra. Fampiharana rindrina fampiharana rindrina ivelany; Varotra anatiny fanaingoana ny rindrina anatiny ALUTILE Fonosana fitateram-bahoaka amin'ny Bulk na amin'ny Tranga hazo Araka ny filazan'ny mpanjifa 1220x2440mm na araka ny fangatahan'ny mpanjifa Origin Nanchang, Faritanin'i Jiangxi, Sina. HS Code 7606 Production Introduction: tontonana mitambatra amine dia mitambatra amin'ny sosona ambony sy ambany amin'ny ravina aliminioma, akora fototra polyethylene tsy misy poizina, ny faritra roa dia palitao coil ...
Varavaran-tsolika mifono alim-baravarankely PVDF mifono rindrina ivelany
Fampahalalana fototra. Modely NO. Fanamboarana rindrambaiko rindrambaiko ety ivelany amin'ny rindrina ivelany haingon-trano ivelany; Varotra anatiny fanaingoana ny rindrina anatiny ALUTILE Fonosana fitateram-bahoaka amin'ny Bulk na amin'ny Tranga hazo Araka ny filazan'ny mpanjifa 1220x2440mm na araka ny fangatahan'ny mpanjifa Origin Nanchang, Faritanin'i Jiangxi, Sina. HS Code 7606 Production Introduction: tontonana mitambatra amine dia mitambatra amin'ny sosona ambony sy ambany amin'ny takelaka aluminium, ny fotony polyethylene tsy misy poizina ...
Alutile Brand PVDF Coating Aluminium Composite Panel ho an'ny rindrina ivelany
Fampahalalana fototra. Fampiharana rindrina fampiharana rindrina ivelany; Varotra anatiny fanaingoana ny rindrina anatiny ALUTILE Fonosana fitateram-bahoaka amin'ny Bulk na amin'ny Tranga hazo Araka ny filazan'ny mpanjifa 1220x2440mm na araka ny fangatahan'ny mpanjifa Origin Nanchang, Faritanin'i Jiangxi, Sina. HS Code 7606 Production Introduction: tontonana mitambatra amine dia mitambatra amin'ny sosona ambony sy ambany amin'ny takelaka aluminium, ireo fitaovana fototra tsy misy poizina polyethylene, ireo faritra roa ireo dia mifamatotra amin'ny ...
Varingam-pifandraisana vita amin'ny polyester mora vidy
Fampahalalana fototra. Alloy 1100,3003,5005 Famantarana marika ALUTILE Fonosana fitateram-bahoaka amin'ny ankapobeny na amin'ny tranga hazo 1220x2440mm na araka ny fangatahan'ny mpanjifa Origin Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina. HS Code 7606 Production Introduction: tontonana mitambatra amine dia ampifangaroina amin'ny sosona ambony sy ambany amin'ny ravina aliminioma, akora fototra polyethylene tsy misy poizina, ny rindrina roa dia mihosotra miaraka amin'ny varnish fanaova manokana.
Panneaux Composite Aluminium vita amin'ny alim-baravarana roa ho an'ny fitaovana fanaovana sonia dokam-barotra
Fitaovana fanaovana sora-baventy fanaovana dokam-barotra amin'ny takelaka vita amin'ny poliesteram-pandrefesana vita amin'ny alim-bolo
Fampahalalana fototra. Alloy 1100,3003,5005 Famantarana marika ALUTILE Fonosana fitateram-bahoaka amin'ny ankapobeny na amin'ny tranga hazo 1220x2440mm na araka ny fangatahan'ny mpanjifa Origin Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina. HS Code 7606 Production Introduction: tontonana mitambatra amine dia ampifangaroina amin'ny sosona ambony sy ambany amin'ny takelaka aluminium, ireo fitaovana fototra tsy misy poizina polyethylene, ireo faritra roa ireo dia mifono kofehy vita amin'ny fanaingoana manokana. Fampiharana fitaovana manokana miaraka amina b ...